Naafadda Somaliland Oo Cabasho Ma Muujiyay Daryeel La’aan Haysata iyo Wasiirka Arrimaha Bulshadda Dagaal Ugu Jawaabay | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Naafadda Somaliland Oo Cabasho Ma Muujiyay Daryeel La’aan Haysata iyo Wasiirka Arrimaha Bulshadda Dagaal Ugu Jawaabay
Hargaysa (SDWO): Iyadoo wadamo badan oo caalamka ah 3-da bisha December laga xuso maalinta naafadda aduunka ayaa maanta Somaliland laga xusay, hase yeeshee waxaa xuskaasi hadheeyay mudaharaad ay dhigeen dadka naafadda ah ee ku nool Somaliland oo cabasho xoogan ka muujiyeen in aan waxba loo qaban.
Waxaana maanta magaaladda Hargaysa mudaharaad cabasho ah ka dhigay qaar ka mid ah dadka naafadda ka ah araga, dhegaha, indhaha, lugaha, gacmaha iyo meel kale, kuwaasoo xukuumadda u jeediyay dhaliilo la xidhiidha in aan marnaba baahiyahoodda hoos loo eegin.
Waxa kaloo ay cabashadoodda ku sheegeen dadkan naafadda ah ee mudaharaadka sameeyay in ururka naafadda Somaliland ee magaciisa loo yaqaano Somaliland Disability Forum uu yahay mid ay ku shaqaystaan dad gaarra, isla markaana aanu ahayn mid si siman ugu wada adeega dadka naafadda.
Geesta kale wasiirka wasaaradda shaqadda iyo arrimaha bulshadda Somaliland oo ka qayb gelayay munaasibadii lagu xusayay maalinta naafadda aduunka ayaa markii wax laga waydiiyay sababta ay wax ugu qaban waayeen dadkan mudaharaadayay ku gacan saydhay arrinkaasi.
Waxaanu wasiirku ku dooday in aanay maalin keliya intii uu xilka hayay u iman qaar ka mid ah dadka naafadda ah oo wax tabanaya, isagoo cabashadoodii maanta ku tilmaamay mid ay ka danbeeyaan shaqsiyaad danno gaara leh.
Halkan Ka Daawo Cabashadda Naafadda iyo Jawaabtii Wasiirka: